Wakiilka u qaabilsan Soomaliya Qaramada Midoobay oo.maanta ka hadli doono xarunta Qaramada Midoobay | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Wararka Wakiilka u qaabilsan Soomaliya Qaramada Midoobay oo.maanta ka hadli doono...
Wakiilka u qaabilsan Soomaliya Qaramada Midoobay oo.maanta ka hadli doono xarunta Qaramada Midoobay
Golaha Ammaanka waxuu ansixiyay shirkii 8537, 31-kii Maajo 2019 Golaha Amniga,Dib u soo celinta dhammaan qaraarkii hore ee Chapter 7 Soomaaliya.
Hawlaha hoos yimaada cutubka 7aad ee Axdiga Qaramada Midoobay.
Axdiga Qaramada Midoobay, Cutubkiisa VII in ay go’aan ka gaaraan khatarta xad-gudubka nabadda, ama ficil ku saleysan ka hortagga gardarrada nabada iyo Sidoo kale in ay qaadaan talaabo millatari si ay goobtaasi cayiman ugu soo celiyaan nabadda iyo amniga caalamiga ah.
Xeerka Qaramada Midoobay ee IIV wuxuu mamnuucayaa dalalka xubnaha ka ah Qaramada Midoobay ee ku lugta leh dalalka kale ee Qaramada Midoobey ka tirsan in aan lagu xadgudbin, Taasina waxay udub dhexaad u tahay Ujeedada Qaramada Midoobay loo aasaasay ka dib burburkii dagaalkii labaad ee dunida.
Dacwadan xad-dhaafka ah ayaa sidoo kale ka muuqata fikradaha Saxiixayaasha ‘lagaga soo horjeedo dambiilayaasha nabadda’ oo kasoo horjeeda horimarinta, madax-bannaanida siyaasadeed ama madax-bannaanida dawladnimo iyo ku xadgudubka heshiisyadaasi caalamiga ahaa sida ” Nuremberg Trials’ concept” kaas oo ka dhigaya ka qeybgalayaasha burburinta nabada dhammaan dembilayaal dagaal.
Cutubka 7aad sidoo kale wuxuu sheegayaa golaha amaanka ee QM. In la magacaabay Saraakiisha Ciidanka stiraatiijiyada shaxdeeda lagu meel-dhigay Golaha Ammaanka ee QM. Waxayna ka koobanaan doonaan saraakiisha hoolgalka shan xubnood oo joogta ah oo ka tirsan Golaha Amaanka Waxaana hogaamin-doona wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud Qaranada Midoobey.
Golaha Amaanka Wuxuu hoosta ka xariiqay in khatarta al-Shabaab iyo kooxaha kale ee hubaysan ee mucaaradka ah in lagu tirtiro qaab milatari oo keliyah, taasina waxay ugu baaqeysaa FGS, FMS, AMISOM, Qaramada Midoobey inay ka wada shaqeeyaan si ay u qaataan hab dhamaystiran oo amniga ah;
Golaha Wuxuu go’aansaday in uu u oggolaado Dowladaha Xubnaha ka ah Midowga Afrika in ay sii wadaan howlgalka AMISOM ee la gaarsiinayo 31-ka May ilaa 2020, oo ay ku jiraan ugu yaraan 1,040 oo askari oo bilays ah, iyo in la yareeyo heerka ciidamada AMISOM ee jooga 1000 illaa ugu badnaan heerka 19,626, 28kii Febraayo 2020, iyada oo la waafajinayo Qorshaha Kala-guurka, iyo ku-wareejinta ciidamada ammaanka ee Soomaaliya, haddii Golaha Ammaanka go’aansado in la badiyo ama xawliga la yareeyo iyadoo la tixgelinayo xaaladaha kusoo kordhay Qorshaha Kala-guurka, oo ay ku jirto awoodda Soomaliya si ay u dhaliso awood-bixin, lala xisaabtami karo, la aqbali karo oo la awoodi karo, iyo sidoo kale qiimeynta halista ah ee Midowga / UN / FGS ee xaaladaha dhulka, iyada oo lala kaashanayo la-hawlgalayaasha la xidhiidha, kuna marti-galaya QM iyo AU si loo soo saaro soo jeedin, oo ku salaysan FGS qorshayaasha, si loo xakameeyo qaybaha amniga doorashooyinka soo socda, oo ay ku jiraan haddii baahi loo qabo;
Hadaba; bisha August 21 Wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan, ayaa u duulay Xarunta Qaramada Midoobey ee New-york.
Wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, ayaa qudbad ka jeedin-doona maalinta Arbacada qudbadaasi ayuu kaga hadli-doona isbedelada siyaasadeed ee Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan doorashada Jubaland.
Hadaba Waxaa dhici karta faragalinta muuqata ee doorashada Jubaland oo hada aad moodo in ay gacanta soomaaliya ka baxday iyo ciidamada AMISOM oo ku kala qeyb-samay Doorashada Jubaland. In Go’aan culus oo xakameyn doona kasoo baxo, Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobe.